Kobaca Tablet: Isticmaalka Istaatistikada iyo Waxyaabaha laga Filayo | Martech Zone
Kobaca Tablet: Isticmaalka Istaatistikada iyo Filashooyinka
Axad, Juun 29, 2014 Douglas Karr
Waxaan ahay qof isticmaala kiniiniga jecel a Waxaan haystaa iPad iyo iPad Mini marka laga reebo MacBook Pro iyo iPhone. Si xiiso leh oo ku filan, waxaan u isticmaalaa mid kasta oo ka mid ah aaladaha si gaar ah. Ipad Mini-kayga, tusaale ahaan, waa kaniiniga ugu fiican ee keenaya shirarka iyo safarada ganacsiga halkaas oo socod badan ku socdo mana doonayo inaan ku jiido laptop-kayga iyo dhamaan fiilooyinka lagama maarmaanka ah, xeedho, iyo qalab. Ipad-kayga ipadku wuxuu caadi ahaan ag fadhiyaa sariirta telefishanka agtayda si aan wax uga iibsado ama ugu akhriyo Aad ayey ugu weyn tahay ganacsiga laakiin way ku weyn tahay guriga.
Kiniiniga iyo Laptops-ka ayaa xaalufin ku sameeyay suuqii desktop-ka. Sanadkii 2013, suuqa desktop PC desktop ayaa hoos u dhacay 98%! Waxaan dhawaan dib u qalabeeyay xafiiskeyga gurigaba kumbuyuutarkuna wuu fariistay halkii uu taagnaa laptop-ka iyo a Bandhigga 'Thunderbolt'. Waxsoosaarkaygii guriguna cirka ayuu isku shareeray tan iyo markii aan kaliya qaato laptop-kayga inta u dhexeysa xafiisyada umana baahna inaan ka walwalo ku xirida xeedho, faylal wareejinta, iwm.
Sannadkii 2013 iibkii kiniiniyada ayaa qarxay, isagoo kordhay 68% cajiib ah si loo gaaro 195.4 milyan unugyo adduunka oo dhan. Iyadoo iibinta caalamiga ah ee la filayo inay garaacdo 1 bilyan unug illaa 2017, waxay noqotay mid muhiim u ah maamulayaasha heer kasta si ay u fahmaan muhiimadda kiniiniyada iyo sida ay u saameynayaan wareegga wax iibsiga iyo ka qeyb qaadashada guud ee macaamiisha.
Hubinta bartaada inay ka jawaab celineyso isticmaalka kiniiniga - iyo sidoo kale ka faa'iideysiga qalabka dhexdhexaadinta tilmaamista ama horumarinta barnaamijka - waxay ku siin kartaa horumar weyn macaamilkaaga iyo kaqeybgalka booqdeyaasha iyo sidoo kale beddelaad. Xaqiiqdu waxay tahay, dadka isticmaala kiniiniyada waxay leeyihiin waxqabadyo gaar ah, sida akhriska iyo wax iibsiga, inay gabi ahaanba jecel yihiin inay u isticmaalaan kumbuyuutarradooda wax ka badan muuqaalkooda moobaylka, laptop ama desktop-ka. Waa maxay khibrada u eg akhristayaashaada?
Tags: 2014meeqa kiniin baa la iibiyaybogga jawaabta lehkoritaanka kiniinkamuuqaalka kiniinigatirakoobka kiniinkatirakoobka isticmaalka kiniinkaXogta isticmaalka kiniinkasafarka iyo isticmaalka kiniinkausablenet
Khaladaadka Horumarinta Mawduuca Wadaagga ah ee WordPress
Jun 30, 2014 at 1: 50 PM
Ma jiraa qof eegaya kiniinigii ugu dambeeyay ee Microsoft / pc. Waxaan doonayaa inaan helo maanta oo aan isku dayo inaan ka baxo dhammaan waxyaabaha Apple. G'bye Apple! Waxaan ku jiraa barnaamijka 'Macbook pro', 'iMac', kiniinigii ugu dambeeyay iyo iPhone. F-taas! Salaan dheh tiknolojiyad fur!
Jun 30, 2014 at 2: 00 PM
Waxaan ahay taageere Apple mana arkin sabab aan uga fogaado iyaga Nancy.